A mammografi waa nooc gaar ah oo raajo ah oo u oggolaanaya dhakhaatiirta inay ogaadaan kansarka naasaha ee haweenka. Sababtoo ah mammogram-yada waxay ogaan karaan burooyinka marxaladahooda hore-marka ay yaryar yihiin oo ay fududahay in la daweeyo-waxay yihiin kheyraad muhiim ah oo sii socda dagaalka lagula jiro kansarka naasaha.
Haddaba, maxaad filanaysaa inta lagu jiro raajada ogaanshaha ee ii dhow ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka? Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad ballan la samaysato kooxdayada Columbus, OH. Farsamayaqaanadeena xirfada leh waxay dib u eegi karaan habka si buuxda oo ay uga jawaabaan su'aalo kasta oo aad qabtid ka hor ballan.
Miyaan u baahanahay baadhis ama raajada ogaanshaha?
Raajooyinka baarista waxaa lagula talinayaa haweenka ka bilaabma 40 jir. Raajooyinkaan ayaa noo ogolaanaya inaan naasahaaga ka baarno kuusno ama cillado kale. Mammograms-kan waxa kale oo loo baahan karaa haddii aad leedahay xubin qoyskaaga ka tirsan oo qaba kansarka naasaha (sida hooyadaa ama walaalahaa).
Baaritaanka raajada naasaha waxaa la bixiyaa sanadkii hal mar dumarka aan lahayn astaamo muuqda. Si kastaba ha ahaatee, raajada ogaanshaha ayaa lagula talinayaa ka dib marka raajada baadhista ay muujiso natiijooyin shaki leh ama calaamadaha kansarka naasaha.
Sideen ugu diyaar garoobi karaa ballan naaso?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo fudud oo loogu diyaargaroobo ballanta mammogram-ka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka. Xiro kor raaxo leh oo noo ogolaanaysa inaan si fudud u galno naasahaaga. Iska ilaali barafeeyaha iyo kareemka maalinta ballanta, sababtoo ah alaabooyinkani waxay faragelin karaan natiijada raajadaada. Ka saar wixii dahab ah ee birta ah iyo daloolinta ama uga tag guriga. Talooyinka kale ee waxtarka leh waxaa ka mid ah:
Ha isku dayin inaad soonto ballantaada mammogram-ka, sababtoo ah tani lagama maarmaan maaha
U qaado daawooyinkaaga maalinlaha ah si caadi ah, ilaa si kale uu dhakhtar kuu tilmaamo
Keen aqoonsigaaga cusub iyo macluumaadka caymiska ballankaaga
Xiro kabo fidsan (ciribta sare ama kabo waxay sababi karaan raaxo darro)
Haddii aad leedahay naasaha lagu beero, u sheeg xubin ka tirsan kooxdayada ka hor raajada naasaha
Mammogaramku wax ma yeeli doonaa?
Mammograms-ka Columbus, OH looma tixgeliyo mid xanuun leh. Waxaa laga yaabaa inaad dareento xoogaa cadaadis ah iyadoo farsamayaqaanadeena ay naaskaada saarayaan mashiinka, laakiin dareenkani waa inuu yaraadaa wax yar ka dib. Waxaa laga yaabaa inaan qaadno sawiro badan inta lagu jiro raajada raajada, mid walbana waxay soconaysaa dhowr ilbiriqsi oo kaliya. Mammogram-ka ogaanshaha waxa uu qaadan karaa in ka badan raajada baadhista caadiga ah laakiin waa in aanu faragelin hawl maalmeedkaaga.
Miyaan ka welwelaa mammogram-ka aan caadiga ahayn?
Farsamadayada horumarsan waxay u ogolaataa bukaanada inay helaan natiijooyin degdeg ah oo sax ah. Ha niyad jabin haddii aad leedahay mammogram aan caadi ahayn. Inta badan haweenka waxay yeelan doonaan ugu yaraan hal aag oo walaac laga qabo. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa dib u eegi kara sawirada raajadaada oo ay go'aamin karaan haddii tillaabooyin dheeraad ah loo baahan yahay.
Waxaan rajaynaynaa inaad nagu sii aaminto raajada baadhista sanadlaha ah, sawirka ogaanshaha, iyo adeegyada guud ee haweenka. Mammograms-ka waxa lagu bixiyaa oo keliya goobtayada Columbus, markaa tan maskaxda ku hay markaad ballansanayso ballantaada.
Iga qaado raajo ogaanshaha
Haddii aad ka yaabbanaysay tafaasiisha raajada ogaanshaha ee ii dhow, waxaan rajaynaynaa in tani ay ku siisay jawaabo dhamaystiran su'aalahaaga. Hadafkayaga Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waa inaan yareyno wixii cabsi ama walaac ah, gaar ahaan haddii lagugu sameeyo naaso aan caadi ahayn. Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan raajada ogaanshaha ee Columbus oo aad u baahan tahay ballan, na soo wac. Waan ku faraxsanahay inaan ku soo qaadno habka.
Goobta Columbus Mammografi
U diyaari Imtixaankaaga Naag ee Soo socda ee Caafimaadka Fiican Shantan Qodob
Baadhitaannada dumarka fayoobay waxay muhiim u yihiin caafimaadkaaga haweenka. Akhri talooyinkayaga ku saabsan sida loogu diyaargaroobo ballantan oo ka yimid OBGYN tababaran oo Columbus jooga.
Wax ka baro Saamaynnada suurtogalka ah ee ka dhalan kara
Qalliinka ilmo-galeenka ee loo yaqaan 'robotic hysterectomy' waa qalliinka ugu yar ee qalliinka marka la barbar dhigo hababka kale. La hadal dhakhtarka dumarka oo baro waxa laga filayo soo kabashada.